Tsy tana ny ain’ilay tovolahy noratraina: nidoboka any Tsiafahy ny kandidà Za’Gasy | NewsMada
Tsy tana ny ain’ilay tovolahy noratraina: nidoboka any Tsiafahy ny kandidà Za’Gasy
Na teo aza ny fiala-nenina tamin’ny fitsaboana azy, tsy tana ny ain’ilay tovolahy noratraina nandritra ny fifidianana depiote teo, teny Ambohimitsimbina. Naiditra vonjimaika am-ponja eny Tsiafahy, omaly, kosa ilay kandidàn’ny Za’Gasy, taorian’ny nanolorana azy teny amin’ny fampanoavana.
Niakatra fampanoavana, omaly tetsy Anosy, ilay raharaha fiahiahiana ny kandidà Za’Gasy, Ratiarison Jean Navandahy, ho anisan’ireo namono ny ekipan’ny kandidà iray nifaninana taminy. Naiditra vonjimaika am-ponja (PD) any Tsiafahy avy hatrany ny tenany taorian’izany. Nodimandry kosa anefa ilay tovolahy voadaroka.
Hiverina eny amin’ny fampanoavana
Ankoatra ny kandidà Za’Gasy, misy roa lahy hafa koa anisan’ny voarohirohy amin’izao raharaha izao, notanana vonjimaika am-ponja (MD) any Tsiafahy. Mbola hiverina eny anivon’ny fampanoavana avokoa izy ireo, ny 13 jona izao, miaraka amin’ireo namany dimy hafa koa.
Niaro hatramin’ny farany ity kandidà ity ireo mpomba azy amin’ny tsy tokony hahatafiditra azy amin’izao raharaha izao, raha ny resaka nataon’izy ireo tamin’ny mpanao gazety, omaly. Anisan’izany ny filazana fa nihazakazaka nandositra io tovolahy io ka voafingana ary nianjera sy naratra. “Manana ny porofo rehetra momba izany izahay”, hoy izy ireo.
Nosamborin’ny Emmo/Reg ny kandidàn’ny Za’Gasy
Tsiahivina fa notanana teny amin’ny zandary eny Ankadilalana, hatramin’ny omaly, nialoha ny niakarany fampanoavana, ny kandidà Ratiharison Jean Navandahy na Za’Gasy eny amin’ny boriborintany II. Nosamborin’ny Emmo/Reg, ny alatsinainy alina taorian’ny fifidianana, ny tenany. Voalaza fa notorin’ny fianakavian’ilay naratra ity kandidà ity, ny harivan’ny andro nanaovana ny fanisam-bato. Notazonina eny amin’ny polisy Tsaralalàna kosa ny olona dimy hafa mpiara-dia aminy.
Notsaboina teny amin’ny hopitaly nandritra ny andro telo andro kosa ilay naratra ary efa nahina ny ainy tamin’izany. Niafara amin’izao fahafatesany izao izany. Etsy andaniny, efa tafiditra amin’ilay raharaha hafa momba ny fanahiana azy ho nivadi-pitokisana amin’ireo mpiara-miombona antoka aminy ny kandidà Za’Gasy. Efa eny amin’ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny kolikoly (Pac), ny volana avrily teo, ny fitoriana momba azy niainga avy amin’ny fitorian’ireo niara-niasa taminy.